ट्रम्पले असहयोग गर्दैमा डब्लुएचओ थला पर्दैन : कुलचन्द्र गौतम – eSajha News
प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ११:३१
यिनै प्रश्न हामीले संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव डा.कुलचन्द्र गौतमलाई सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ, डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एदनाम गेब्रियसससँगै कामसमेत गरिसकेका पूर्वउपमहासचिव डा. गौतमसँग अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अमेरिकाले सहयोग नगर्दैमा थला चाहिँ पर्दैन । उसले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई पूर्ववत् सञ्चालनमा ल्याएर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्छ । डब्लुएचओले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सफल हुनेछ ।
त्यसकारण डब्लुएचओको निर्णय पनि शतप्रतिशत सही नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । उसका पनि कमी कमजोरी छन् । कमजोरीरहित त तपाईं हामी पनि छैनौँ नि ।
डब्लुएचओले चीनको समर्थन गर्‍यो भनेर सहयोग झिकेको ट्रम्पको भनाइ छ । चीनको विषयमा सक्कली कुरा गरेन, त्यही भएर सहयोग दिन्न भनेका छन् । यी सबै देखावटी कारण हुन् ।
५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ११:३१ मा प्रकाशित